Malaikialina-Mampikony: Mampihorohoro ny dahalo
mercredi, 06 décembre 2017 21:46
Notafihin'ny dahalo ny tananan'Ambohibengy, Fokontany any amin'ny faritra mampisaraka ny Distrikan'i Mampikony sy Tsaratanana ny faran'ny herinandro lasa teo.
Vaky nandositra nanavotra aina niazo an'Ampisaraha ny mponina tao amin'io tanàna io vokatr'izany. Talata ny andro tsena ao Ampisaraha ; ny talata tamin'ny 1 ora maraina anefa dia dahalo 100 lahy no tonga nanafika tao Ampisaraha, nandroba ny entan'ireo mpivaro-mandeha sy ny tao an-toerana, ary koa naka omby 80 be izao.
Nirohotra namonjy ny renivohitry ny Kaominina Malaikialina ihany koa ny mponina tao Ampisaraha, izay manahy sao mba ireo mponina nitsoaka avy any Ambohibengy tonga tao Ampitsahara no arahin'ireo dahalo ireo.
Tsenan'i Malaikialina ny andro alakamisy. Tonga indray koa anefa ny feo fa ho avy hanafika izao alarobia alina izao ny dahalo an-jatony. Vokany dia tsy tonga ireo mpivaro-mandeha mitety tsena. Misy "Poste Avancé" ny Zandary ao Malaikialina, saingy naleon'ireo Zandary ireo koa niala ny toby, namonjy toerana avo.
Miaina anaty tebiteby ny mponina ao Malaikialina amin'izao fotoana, manoloana izao asan-dahalo izao.
cheap viagra tadalafil 5mg cialis without prescription viagra canada free sample pharmacy on line meds from india Canadian Pharmacy Online no script generic cialis tadalafil healthy man viagra scam maxifort online
healthy male viagra scam canadian pharmacy Canadian Pharmacy Online no script cialis for sale canada best online pharmacy for ed canadianpharmacy supreme suppliers in india nizagara online cialis from canada onlineepharmacy.ru
jeudi, 07 décembre 2017 19:33